ikhaya » Umbhali woLondolozo lwababhali: uThomas Coughlin
Umbhali woLondolozo lwababhali: uThomas Coughlin
UJeff Greenwald, intloko yeNtengiso kwiCandelo leeNkcukacha zeZiko loLwazi lweeNkampani zeWest Digital Corporation, uya kuthetha malunga "neZintlanu zeNkcukacha zeDatha-kunye neLu," ngoJuni 23, i-2016 ngexesha leNkomfa yokuThengiswa koBucala (SM) (CS 2016) Ibanjwe kwi-DoubleTree Hotel West West eLos Angeles eCulver City, CA. I-Greenwald iya kuthetha malunga nedatha esebenzayo, idatha ishukumo, ...
Imiboniso yokugcinwa kwenkomfa Inkcazo yokuhanjiswa kwengxelo yenkomfa inguSeptemba 14, 2015. Umxholo wenkomfa yile: Ukugcinwa kwee-5,000 Zonyaka ezilandelayo (eziphefumlelwe ziziganeko zaseYiputa kwihhotela laseLuxor). Abaxhasi bokuqala kunye nababonisi yiCoughlin Associates, iDrive Trust Alliance, i-Quantum, i-SNIA, i-SNIA SSSI, i-HDDFA kunye ne-RDC. Ukuthunyelwa kokuthetha ngoku kwamkelwa ngoSeptemba 14, 2015 kwi-www.storagevisions.com/2016Call_for_Presentations.htm, kwaye ...
INgqungquthela ye-I-2015 yoLondolozo lweNkomfa Izisa iiNgcono zoLondolozo lweeMiboniso
Ingqungquthela yeshumi elinesine kwiNkomfa yokuLondolozwa kweeNkcukacha zoLondolozo lweNdleko (inkqubo yeqabane kwi-2015 International CES) yanikezelwa ngexesha lokumkela ekupheleni komhla wokuqala wokubonisa kwi-Riviera Hotel Convention Centre e Las Vegas, Nevada. Amabhaso athe aqonda iinkampani eziqhubela phambili ubugcisa bezobuchwephesha bokugcina ubuchwephesha ezisetyenziswe kubasebenzisi bekhompyutheni, imidiya kunye nokuzonwabisa ...
INgqungquthela ye-I-2015 yoLondolozo lweMiboniso iNgqungquthela yeeNkcazo zeMiboniso zonyaka
Ingqungquthela yeshumi elinesine kwiNkomfa yoLondolozo lweeNkcazo (SV 2015) ivakalisa abagqityiweyo kwii-2015 Visionary Storage Awards. I-ajenda yenkomfa epheleleyo neentetho ezichongiweyo zingabonwa kwi: www.storagevisions.com/2015Agenda.htm. I-SV 2015 yinkqubo yoqabane kwi-CES 2015, kunye nokubhaliswa kwenkomfa yangaphambili kunika ipasiti yamahhala kwimiboniso ye-CES. Imveliso yokugqibela kunye neenkampani zonyaka ...
Izibane ezikhanyayo kunye nokugcinwa okukhulu kwiNgqungquthela ye-2015 yokuBoniswa kweMiboniso
Inkomfa yeshumi elinesine kwiNkomfa yoLondolozo lweeNkcukacha zeSitoreji (SV 2015) iquka iiseshoni ezimbini ezijolise ekugcinweni kwedatha kwiimidiya kunye nokuzonwabisa. I-ajenda yenkomfa epheleleyo neentetho ezichongiweyo zingabonwa kwi: www.storagevisions.com/2015Agenda.htm. I-SV 2015 yinkqubo yeqabane kwi-2015 CES. Iinkomfa ze-2015 zokugcina iinkomfa ziquka iiseshoni ezimbini ezijolise ekugcinweni kwimidiya kunye nokuzonwabisa, enye igxininise ...